Gini mere Chineke jiri nye anyi abù oma? Kedụ ka m ga - ebido kpee abụ ọma? | Ilblogdellafede
Gini mere Chineke jiri nye anyi abù oma? Kedụ ka m ga - ebido kpee abụ ọma?
Mgbe ụfọdụ anyị niile na-agbasi mbọ ike ịchọta okwu iji gosipụta mmetụta anyị. O bu ya mere Chukwu ji nye anyi Abuoma.
Mmeme nke akụkụ ahụ niile nke mkpụrụ obi
Onye na-eme mgbanwe na narị afọ nke XNUMX, John Calvin, kpọrọ Abụ Ọma "mmewere nke akụkụ nke Mkpụrụ Obi" niile ma chọpụta na
Enweghị mmụọ ọ bụla nwere ike ịmara nke a anaghị anọchite anya ya ebe a dịka enyo. Ma obu nkea, Mo Nso nekotara. . . ihe mgbu niile, mgbu, ụjọ, obi abụọ, olile anya, nchekasị, ihe mgbagwoju anya, na nkenke, mmetụta niile nke na - adọpụ uche na uche nke mmadụ agaghị ewe iwe.
Ma ọ bụ, dịka onye ọzọ kwuru, ebe Akwụkwọ Nsọ ndị ọzọ na-agwa anyị okwu, Abụ Ọma na-ekwuchitere anyị. Abù Ọma nyere anyi otutu okwu ndi mmadu ji agwa Chineke okwu banyere nkpuru obi anyi.
Mgbe anyị chọsiri ike ife ofufe, anyị nwere abụ ọma nke inye ekele na otuto. Mgbe obi jọrọ anyị njọ na nkụda mmụọ, anyị nwere ike kpee abụ ọma nke uju. Abụọ ọma na-ekwupụta nchegbu anyị na egwu anyị ma na-egosi anyị otu anyị ga-esi tụkwasịnụ obi anyị na Onyenwe anyị ma mee ka ntụkwasị obi anyị niile dị na ya. Ọbụnadị iwe na ọnụma na-achọta abụ ọma nke ọbụbụ ọnụ na-atọ ụtọ, bụ nke na-ada ụda na-egbu mgbu, ọnụma na iwe. (Isi okwu a bụ ime ihe n'eziokwu iwe gị n'ihu Chineke, emela iwe gị n'ebe ndị ọzọ nọ!)
Ihe ngosi nke mgbaputa n’ime ihe nkiri nke nkpuru obi
A gbahapụ ụfọdụ n'ime Abụ Ọma. Were Abụ Ọma 88: 1 nke na-alụ ọgụ maka otu n'ime amaokwu na-enweghị olileanya na Akwụkwọ Nsọ dum. Ma ọbụ abụ ọma ndị ahụ bara uru, n'ihi na ha na-egosi anyị na anyị anọghị nanị anyị. Ndị nsọ na ndị mmehie kemgbe oge gara aga na-agagharị na ndagwurugwu nke onyinyo ọnwụ. Ọ bụghị gị bụ onye mbụ nwere nkụda mmụọ na-enweghị olileanya nke enweghị olileanya.
Mana kariri nke a, abụ ọma, mgbe a na-agụ ya dum, na-egosi ihe mgbapụta nke mgbapụta na ụlọ ihe nkiri nke mkpụrụ obi. Fọdụ ndị ọkà mmụta Akwụkwọ Nsọ achọpụtala usoro ụzọ atọ dị na abụ ọma: usoro nghazi, ntụgharị uche, na ntụgharị uche.
Abù ọma nke nguriri n’egosiputa udiri anyi n’ebe Chineke no, nke ekere anyi na ya, nmekorita nke ntụkwasị obi na ntukwasi obi; ọ joyụ na nrube-isi; nsọpụrụ, ọ joyụ na afọ ojuju.
2. Ntụgharị uche
Abù ọma nke icheghari egosi anyi mmadu di onodu ha dara ada. Nchekasị, ụjọ, ihere, obi amamikpe, obi erughị ala, iwe, obi abụọ, obi nkoropụ: ụdị ọzọ nke mmetụta mmadụ na-egbu egbu na-ahụ ọnọdụ ya n'Abụ Ọma.
Ma Abu oma nke ntugharia negosi nkwekorita na nbuputa na ekpere nke ncheghari (Abu oma a ma ama), ekele nke otuto na ukwe otuto nke na ebuli Chineke elu maka oru nzoputa ya, oge ufodu na-arutu aka n’ebe Jisos, onye nwe Mezaia di. ye Edidem David emi anamde mme un̄wọn̄ọ Abasi, ẹwụk obio ubọn̄ Abasi ẹnyụn̄ ẹnam kpukpru n̄kpọ ẹdi obufa.
Ọtụtụ abụ ọma n'otu n'otu na-adaba na otu n'ime edemede ndị a, ebe otu ndị na-abụ abụba na-agbanwegharị n'ụzọ dị ukwuu site na ntụgharị uche gaa na ntụgharị uche, site na mkpu arịrị na ịkwa arịrị banyere ofufe na otuto.
Ihe omumu ndia negosi udiri nke Akwukwo Nso: ihe okike, odida na mgbaputa. E kere anyị ife Chineke. Dị ka katkizim ochie si kwuo, "Ebumnuche mmadụ bụ inye Chineke otuto na ị enjoyụrị ọ himụ ruo mgbe ebighị ebi." Ma ọdịda na mmehie nke onwe anyị na-eme ka anyị nwee nkụda mmụọ. Ndụ anyị, ọtụtụ oge karịa, jupụtara na nchekasị, ihere, obi amamikpe na ụjọ. Mana mgbe anyị zutere Chineke mgbapụta anyị n'etiti ọnọdụ ndị ahụ na-akpata obi erughị ala, anyị ga-aza ya site na ncheghari ohuru, inye ekele, inye ekele, olile anya na otuto.
Kpee Abụ Ọma
Alonemụ usoro ihe omimi ndị a ga - enyere anyị aka ịghọta otu abụ ọma dị iche iche nwere ike isi rụọ ọrụ na ndụ anyị. Iji ikwughachi Eugene Peterson, abụ ọma bụ ngwaọrụ maka ekpere.
Ngwaọrụ na-enyere anyị aka ịrụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ na-edozi mmiri gbajiri agbaji, iwulite ụgbọ mmiri ọhụụ, ịgbanwe igwe ihe n'ụgbọ, ma ọ bụ ije ije n'oké ọhịa. Ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo ngwaọrụ, ị ga-enwe oge ị ga-enwe ike ịrụcha ọrụ ahụ.
Ever nwetụla mgbe ị chọrọ iji ihe nkiri sịnịma Phillips mgbe ịchọrọ isi mma? Ahụmahụ na-ama jijiji. Mana nke a abụghị n'ihi enweghị ntụpọ Phillips. Tool nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ na-ezighi ezi maka ọrụ ahụ dị ugbu a.
Otu n’ime ihe dị mkpa anyị nwere ike ịmụta ka anyị so Chineke na-eje ije bụ otu esi eji Akwụkwọ Nsọ dịka o bu n’obi. Akwụkwọ Nsọ dum sitere na mmụọ nsọ Chineke, mana Akwụkwọ Nsọ niile adabara ọnọdụ obi niile. Enwere ụdị onyinye Chukwu nyere site na mmụọ nsọ - mmụọ dị iche-iche kwesịrị ịkpa ike na ọnọdụ mmadụ. Oge ụfọdụ anyị chọrọ nkasi obi, oge ụfọdụ ntuziaka, ebe oge ndị ọzọ anyị chọrọ ekpere nke nkwupụta na mmesi obi ike nke amara na mgbaghara nke Chineke.
Mgbe m n’agbalite uche n’echeche, Abu oma m ji arutu aka na Chineke dika oke nkumem, ebe mgbaba m, onye na-azuru m aturu, eze m (dika Abu oma 23: 1, Abuoma 27: 1, Abuoma 34: 1, Abụ Ọma 44: 1, Abụ Ọma 62: 1, Abụọma 142: 1).
Mgbe ọnwụnwa na-adabaghị m, achọrọ m amamihe nke abụ ọma nke na-eduzi nzọ-ụkwụ m n'ụzọ nke ezi omume nile nke Chineke (dịka: Abụ Ọma 1: 1, Abụ Ọma 19: 1, Abụ Ọma 25: 1, Abụ Ọma 37: 1, Abụ Ọma 119: 1).
Mgbe m kuru ya ma nwee obi amam-ikpe, a choro m Abuoma iji nyere m aka inwe olile-anya na ebere nke Chineke na ịhụnanya na-adịghị agha agha (dịka Abụ Ọma 32: 1, Abụ Ọma 51: 1, Abụ Ọma 103: 1, Abụ Ọma 130 : 1).
N’oge ndị ọzọ, m ga-agwa Chineke ókè m si chọọ ya, ma ọ bụ ole m hụrụ ya n’anya, ma ọ bụ ole m chọrọ ito ya (dịka.
Ingchọta ma kpee abụ ọma nke dabara nke ọma na obi gị niile, ga-agbanwe ahụmịhe gị.
Echekwala ruo mgbe ị nọ na nsogbu --bido ugbu a
Enwere m olile anya na ndị na-adọga ugbu a na ndị na-ata ahụhụ ga-agụ nke a ma gbabegakwa ngwa ngwa na abụ ọma. Mana maka ndị na - anọghị na nsogbu ugbu a, ka m kwuo nke a. Echepụla ruo mgbe nsogbu ị na-agụ ma na-ekpe abụ ọma. Hapụ ugbu a.
Mepụta okwu maka ekpere maka onwe gi. Mara mmewere nke mkpụrụ obi gị nke ọma. Jiri obi gị dum mee ihe nkiri nke mgbapụta na-ewere ọnọdụ n'ụlọ ihe nkiri nke obi mmadụ - na ụlọ ihe nkiri nke obi gị. Mara ngwa ọrụ ndị a Chineke nyere. Mụta iji ha nke ọma.
Jiri okwu Chineke gwa Chineke okwu.
← Na post gara aga Gara aga post:Chee echiche taa ma ọ bụrụ n’ịhụ n ’obi asị
Ọzọ Post → Post ozo:Pontifical Academy na-agbachitere akwụkwọ coronavirus nke na-enweghị aha Chineke